ब्लग-टिपिंग: Catalyze, सफ्टवेयर विकास र उपयोगिता विज्ञहरूको लागि एक सामाजिक नेटवर्क Martech Zone
ब्लग-टिपिंग: Catalyze, सफ्टवेयर विकास र उपयोगिता विज्ञहरूको लागि एक सामाजिक नेटवर्क
आइतबार, अक्टोबर 21, 2007 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
मँ लाई धेरै समय भयो एक ब्लग टिप टम हम्बरबार द्वारा केहि हप्ता पहिले मलाई त्यो कुरा याद आयो उत्प्रेरक। एउटा काम परिवर्तन र पक्ष अनुबन्धले मेरो साइटमा दिनको हिसाब गर्न सक्ने समयको मात्रालाई छोटो बनायो। धन्यबाद, त्यो अब घुम्न थालेको छ।
पहिले, अघिल्लो ब्लग-टिपिंगमा केही प्रतिक्रिया
मैले Lendo.org मा André बाट शब्द पाएँ कि त्यो परिवर्तनहरू मैले उनको साइटको लागि सिफारिश गरे आगन्तुकहरू र पृष्ठ दृश्यहरूमा केही अविश्वसनीय बृद्धि भयो। आन्द्रेसँग प्रति दिन लगभग २ 290 ० अद्वितीय आगन्तुकहरू थिए र परिवर्तनहरू भन्दा पहिले करीव page०० पृष्ठ दृश्यहरू। अब, Lendo.org छ प्रति दिन १२०० अनौंठो आगन्तुकहरू, र 1200००० पृष्ठ दृश्यहरू!!!
आज, मँ टप्न लागिरहेको छु Catalyze - व्यवसाय विश्लेषक र यूएक्स पेशेवरहरूको लागि एक समुदाय - रचनात्मक व्यक्ति बाह्य सफ्टवेयर डिजाइनिंग। Catalyze एक ब्लग भन्दा पर जान्छ, यो वास्तवमै एक सामाजिक नेटवर्क हो त्यसैले यो काफी चुनौती हुनेछ! टमले केहि हप्ता पहिले मलाई पिन्ग गरीरहेको छ र धैर्यतासाथ पर्खिरहेको छ!
तपाईं यसमा हाँस्न सक्नुहुनेछ, तर मैले इमान्दारीसाथ "UX" भनेको के हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि चारै तिर खोज्नुपर्‍यो! मैले महसुस गरेन कि यो प्रयोगकर्ता अनुभव को लागी एक संक्षिप्त नाम हो। मलाई यकिन छैन कि मान्छेहरू "UX" मा खोजी गर्दैछन् ... तपाइँ पृष्ठ शीर्षकहरू, आदिमा "प्रयोगकर्ता अनुभव" लेख्न चाहानुहुन्छ। पृष्ठ भित्र, तपाइँ> एक्रोनिम> ट्यागहरू प्रयोग गर्न चाहानु सक्नुहुन्छ: UX सर्च ईन्जिनले टर्म र संक्षिप्त रूप दुबै क्रोल गर्दछ।
यो चुनौती हुन गइरहेको छ, तर म तपाईंलाई आफ्नो घर पृष्ठमा फिड लिंकहरू प्रदान गर्न साँच्चै प्रोत्साहन दिन्छु। यदि तपाइँ भर्खरको पोष्टहरू, भर्खरको फोरम छलफलहरू, र हुनसक्छ भर्खरको घटनाहरूको विस्तृत फिड विकास गर्न सक्नुहुन्छ - जसले पाठकहरूलाई वास्तवमै धेरै मूल्य प्रदान गर्दछ।
त्यो समान नोटमा, मैले याद गरे कि म वास्तवमा तपाईंको ब्लगबाट आरएसएस फिड लिन सक्दछु तर यो ब्राउजरहरूसँग एकीकरणको लागि तपाईंको हेडरमा सम्मिलित छैन। सबै नयाँ ब्राउजरहरूले तपाइँको पृष्ठहरूको हेडरमा एक आरएसएस लिंक पदनाम खोज्दछन् र तिनीहरूले स्वचालित रूपमा ठेगाना बारमा आरएसएस सदस्यता बटन प्रदर्शन गर्दछ। यहाँ कोड जस्तो देखिन्छ।
यहाँ छ कि यो कस्तो देखिन्छ जब तपाईं फायरफक्समा मेरो पृष्ठमा जानुहुन्छ:
तपाईंको पृष्ठ कस्तो देखिन्छ यहाँ छ:
यदि तपाइँ मानिसहरु को लागी तपाइँको साइट को सदस्यता लिन को लागी सरल बनाउनु भयो भने तपाईले अरु सदस्यहरु पाउनुहुनेछ। जस्तै उपकरण प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस् फिडप्रेस तपाइँसँग कति ग्राहकहरू छन् भनेर निगरानी गर्न।
यदि म तपाईंको ब्लग पृष्ठ स्क्र्याप गर्ने गुगल बोट हुँ भने, म तपाईंको पृष्ठलाई "ब्लग थम्बर्गर" को रूपमा सूचकांक बनाउनेछु ... सायद तपाईले खोजिरहनु भएको कुञ्जी शब्दहरू होईन। यदि तपाईं पृष्ठको वास्तविक शीर्षकमा पृष्ठ शीर्षकहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ भने यो मामला: के तपाइँ एक डिजाइन विचारक हुनुहुन्छ? टम हम्बरबार द्वारा वर्तमान विज्डियमलाई क्याटलाइज गर्नुहोस्
खोजी ईन्जिनहरूले ध्यान दिन्छ कि कसरी तपाईंको पृष्ठहरूमा सामग्री निर्माण गरिन्छ। तपाईंको ब्लग पोष्टहरूको मामलामा, पोष्टको शीर्षक केवल वर्ग = "siblog_PostTitle" को साथ लिंक हो। त्यो खोजी ईन्जिनलाई भन्न गइरहेको छैन कि त्यो शीर्षकको बारेमा त्यहाँ केहि महत्वपूर्ण छ। यदि तपाईं आफ्नो अनुप्रयोगको हिम्मत मा जान सक्षम हुनुहुन्छ भने, म सुनिश्चित गर्दछु कि मसँग हेडिंग ट्याग छ, या त <h1> वा> h2> ट्याग मेरो ब्लग पोस्ट शीर्षक संलग्न। म साथै हेडि tag ट्याग प्रयोग गरेर पोष्ट लेख्न सिफारिश गर्दछु।
सायद धेरै अवसरको साथ पृष्ठ तपाईको गृह पृष्ठ हो। यो केवल लिंकहरूको एउटा ठूलो पृष्ठ हो जब एक खोज इञ्जिनले देख्छ। यदि यो पृष्ठ हेडिings्गहरू र अंशहरूसँग स्वरूपण गरिएको थियो जुन तदनुसार ट्याग गरिएको थियो भने, तपाई त्यो सामग्रीलाई अझ राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ।
तपाईंको पात्रो पृष्ठ त्यहाँ एक सदस्यता लिंक हो .. तर सदस्यता लिन लिंक मा केहि छैन। म पनि ब्लग शीर्षकको बारेमा लेखेको जस्तै तपाईं पृष्ठ शीर्षकहरू दर्शाउन सुनिश्चित गर्दछ।
तपाईंको पृष्ठ संरचनामा खन्न, म टेबुल र डिभहरूको अविश्वसनीय जटिल भूलभुलैया देख्छु। म मेरो साथी। नेट विकासकर्ताहरूमा शट लिन चाहन्न, तर म प्राय: जसो यो दुख्छ भनेर देख्छु। एक महान। नेट विकासकर्तासँग एलिमेन्ट पत्ता लगाउन गाह्रो समय हुन्छ, त्यसैले त्यसले यसलाई सजिलो बनाउनको लागि टेबल वरिपरि फ्याँक्छ।
तालिकाहरू डाटाका लागि हुन्, डिभ र स्टाइलशिटहरू सामग्रीका लागि हुन्।
यस तरिकाको बारेमा सोच्नुहोस् - बहाना गर्नुहोस् कि तपाईं खोजी ईन्जिन क्रलर हुनुहुन्छ र तपाईं पृष्ठमा कुन सामग्री इन्डेक्सको लागि उपयोगी छ भनेर 'हेर्न' कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ। क्रोलरहरूले पृष्ठको उपसमिति लिन्छन् ... कसैलाई वास्तवमा के प्रतिशत थाहा छैन, तर तिनीहरूले सम्पूर्ण पृष्ठ लिदैनन्। तपाईंको अनुप्रयोगसँग यति धेरै ढाँचा कोड छ कि वास्तवमा सामग्री फेला पार्न गाह्रो छ! र समय द्वारा तपाईं यो पृष्ठ को आधा तल हो। NET विकासमा यो शैली यति सामान्य छ। यसले अनुप्रयोगलाई लेख्न सजिलो बनाउँदछ, तर क्रॉलरहरूलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ। यदि तपाइँको सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रतिक्रिया प्रदान गर्न को लागी कुनै साधन छ भने, कृपया तिनीहरूलाई सुचित गर्नुहोस्।
म वास्तवमै एक चोटी लिन चाहान्थें "iRise द्वारा संचालित" अधिक जानकारी पाउनका लागि तर यो खाली पृष्ठमा लिंक भयो।
तपाईको पृष्ठमा कुञ्जीशब्दहरू र वर्णनहरूको लागि गतिशील मेटा ट्यागहरू छन्। विडंबना, धेरै खोजी ईन्जिनहरूले यति धेरै ध्यान दिँदैनन्, तर उनीहरूले चोट पुर्‍याउन सक्दैनन्। तपाईंको मेटा विवरणको लागि केहि कामको आवश्यक छ, यद्यपि। यदि मैले तपाईंको क्यालेन्डर पृष्ठ परिणामको रूपमा आएको देख्यो भने, वर्णन आउँछ “Catalyze |” घटनाहरू "। म पक्का छुईन कि तपाईं त्यहाँबाट धेरै मानिसहरूलाई क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ! यसको सट्टामा, म तपाईंको पहिलो अनुच्छेद प्रयोग गर्दछु, "क्याटालिज घटना क्यालेन्डर सबै गतिविधिहरूको लागि बृहत स्रोत हो? स्थानीय वा राष्ट्रिय? जुन व्यवसाय विश्लेषकहरू र प्रयोगकर्ता अनुभव व्यावसायिकहरूको लागि रूचि हो। ”
तपाईंको मूल निर्देशिकामा कुनै robots.txt फाईल छैन। Robots.txt फाईलहरूले खोजी ईन्जिन बट्सलाई थाहा दिन्छ कि तपाइँ कसरी तपाइँको साइट खोजी चाहनुहुन्छ। तपाईं यसमा रोबोट्स.टी.टी.टी. मा एक टन जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ सोधिने प्रश्न पृष्ठ।
तपाईको मूल निर्देशिकामा कुनै साईटम्याप.एक्सएमएल फाईल छैन र कुनै रोबोट.टाक्सट फाइल कहाँ छ भनेर औँल्याउन। तपाइँको साइट खोज इन्जिन मैत्री बनाउन को कुञ्जी खोजी ईन्जिनहरु को लागी तपाइँको साइट को नक्शा को लागी र चीजहरु कहाँ छन् पत्ता लगाउन सजिलो छ। एक साइटम्याप तपाइँको साइट को लागी एक प्रोग्रामेटिक रोडमैप हो। अन्यथा, खोज इञ्जिनहरूले लि link्क मार्फत साइटलाई मात्र स्कोर गर्न सक्दछन् ... के महत्त्वपूर्ण छ भनेर थाहा पाउनु हुँदैन र साइट कसरी व्यवस्थित गरिएको हो भनेर पनि। यो तपाइँको साइटको लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ! मा पढ्नुहोस् Sitemaps.org
म यो अन्तिममा अनुमान लगाउँदै छु, तर क्याटालिजमा ब्याक-एन्ड उपकरणको लाभको अभावमा, तपाईंको साइटले गुगल ब्ल्गसर्च र प्रमुख खोजी इञ्जिनहरूलाई पिंग गरिरहेको छैन जब तपाईंको साइट परिवर्तन हुन्छ वा ब्लग पोष्टहरू बनाइन्छ। फेरी, यो त्यस्तो होइन कि तपाईंको साइट पत्ता लगाईने छैन, तर नेटको वरपर सेवाहरूको सूचना दिँदा चोट पुर्याउँदैन।
तपाईंसँग साइटको एक हेक छ, टम, तर कसैले पनि सचेत छैन कि यो अवस्थित छ कुनै पनि खोज इञ्जिन अनुकूलनको अभावका कारण। तपाईंको साइटमा SEODigger हेर्नुहोस् र तपाईं केवल "Catalyze" को लागी आउँनुहुन्छ। तपाइँ साइट खोज इञ्जिन मैत्री प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न कि सामग्री को सबै व्यर्थ छ। यदि तपाई किन सोचिरहनु भएको छ कि "Catalyze" तपाईको कुञ्जी शव्द हो भने, एक चोटि हेर्नुहोस् उल्टो खोजी तपाइँको साइट मा र तपाइँ किन देख्नुहुनेछ।
शुभ कामना! मलाई थाहा छैन यदि तपाईंसँग परिवर्तनहरू गर्न विकास संसाधनहरू छन् वा तपाईंले एप्लिकेसन विकास गर्ने कम्पनी मार्फत काम गर्नुपर्दछ भने, तर त्यहाँ केहि काम गर्ने कुरा छ।
टैग: ब्लग टिपिंगब्लग सुझावहरूउत्प्रेरक
अपरेशन्सको अर्डरले मलाई प्रोग्रामिंगको लागि कसरी तयार गर्‍यो
अक्टोबर 23, 2007 बिहान 9:49 बजे
हो! सुझावहरू मेरो ब्लगमा ठूलो प्रगति थिए। अब म प्रति दिन 2000 अद्वितीयहरू पुग्न मेहनती छु।
राम्रो काम डगलस!